မက်ဇူကာဘတ် (Mark Zuckerberg) ရဲ့တစ်စက္ကန့်ဝင်ငွေက ဘယ်လောက်ရှိလဲ
23 Feb 2018 . 3:03 PM
၂ဝ၁၇ခုနှစ်ကုန်ဆုံးသွားတာနဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေလည်း ချမ်းသာသွားခဲ့သလို ချမ်းသာတဲ့သူတွေလည်း ဆင်းရဲသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် ဆန်းကြယ်လွန်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ဝ၁၇ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ ဘီလျံနာသူဌေးတွေ ပိုချမ်းသာတဲ့နှစ်လို့ အလွယ်တကူဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် (၅ဝဝ) ကို စာရင်းချကြည့်တဲ့အခါ (၇) ယောက်မှာ (၆) ယောက်က ပိုချမ်းသာခဲ့တယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့်တော့ ၁.၅ ဘီလီယံအထိ မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက် Facebook တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်၊ CEO အနေနဲ့လည်း တာဝန်ယူထားတဲ့ မက်ဇူကာဘတ် (Mark Zuckerberg) ဆိုရင် ၂ဝ၁၇ခုနှစ် အစပိုင်းတုန်းက ၅ဝ ဘီလီယံသာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၂ဝ၁၇ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့အသားတင်ကြွယ်ဝမှုက ၇၄ ဘီလီယံအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်အတွင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလီယံ (၂,၄ဝဝ သန်း) အထိ ဝင်ငွေရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေဟာ Facebook ၊ Instagram နဲ့ WhatsApp တို့လို လူမှုကွန်ရက်တွေက ရရှိခဲ့တာပါ။
တစ်နှစ်ငွေ ၂၄ ဘီလီယံဆိုတဲ့ ပမာဏက မနည်းလှပါဘူး။ သူ့ရဲ့ တစ်လဝင်ငွေဆိုရင် ၂ ဘီလီယံ (၂,ဝဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ ဒေါ်လာ) အထိ ရှိခဲ့တာပါ။ တစ်ရက်ဝင်ငွေ တွက်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်လာ ၆၆ သန်းကျော် (၆၆,၆၆၆,၆၆၆ ဒေါ်လာ) အထိရှိပါတယ်။ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၆၆သန်းဆိုတာကြီးက မျက်ခုံးလှုပ်စရာကြီးပါ။ တစ်စက္ကန့်ဝင်ငွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ၇၇၁. ၆ ဒေါ်လာ ရှိပြန်ပါတယ်။ အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာဈေးဟာ မြန်မာငွေ ၁,၃၄၈ကျပ်အထိရှိတာမို့ မက်ဇူကာဘတ်ရဲ့တစ်စက္ကန့်ဝင်ငွေဟာ မြန်မာငွေ ၁ဝသိန်းကျော် (၁,ဝ၄ဝ,၁၁၆ ကျပ်) တောင် ရှိတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
မကျဇူကာဘတျ (Mark Zuckerberg) ရဲ့တဈစက်ကနျ့ဝငျငှကေ ဘယျလောကျရှိလဲ
၂ဝ၁၇ခုနှဈကုနျဆုံးသှားတာနဲ့ ကမ်ဘာကွီးဟာ အမြိုးမြိုးပွောငျးလဲသှားတယျ။ ဆငျးရဲတဲ့သူတှလေညျး ခမျြးသာသှားခဲ့သလို ခမျြးသာတဲ့သူတှလေညျး ဆငျးရဲသှားတဲ့ဖွဈရပျတှေ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အတှကျ ဆနျးကွယျလှနျးတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂ဝ၁၇ခုနှဈအတှငျးမှာတော့ ဘီလြံနာသူဌေးတှေ ပိုခမျြးသာတဲ့နှဈလို့ အလှယျတကူဆိုနိုငျပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံးပုဂ်ဂိုလျ (၅ဝဝ) ကို စာရငျးခကြွညျ့တဲ့အခါ (၇) ယောကျမှာ (၆) ယောကျက ပိုခမျြးသာခဲ့တယျလို့ သတျမှတျနိုငျပွီး ပမျြးမြှအားဖွငျ့တော့ ၁.၅ ဘီလီယံအထိ မွငျ့တကျခဲ့တယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
လူမှုကှနျရကျ Facebook တညျထောငျသူလညျးဖွဈ၊ CEO အနနေဲ့လညျး တာဝနျယူထားတဲ့ မကျဇူကာဘတျ (Mark Zuckerberg) ဆိုရငျ ၂ဝ၁၇ခုနှဈ အစပိုငျးတုနျးက ၅ဝ ဘီလီယံသာ ပိုငျဆိုငျခဲ့ပမေယျ့ ၂ဝ၁၇ခုနှဈကုနျပိုငျးမှာ သူ့ရဲ့အသားတငျကွှယျဝမှုက ၇၄ ဘီလီယံအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူဟာ ၂ဝ၁၇ခုနှဈအတှငျးမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၄ ဘီလီယံ (၂,၄ဝဝ သနျး) အထိ ဝငျငှရှေိခဲ့တယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ သူ့ရဲ့အဓိကဝငျငှဟော Facebook ၊ Instagram နဲ့ WhatsApp တို့လို လူမှုကှနျရကျတှကေ ရရှိခဲ့တာပါ။
တဈနှဈငှေ ၂၄ ဘီလီယံဆိုတဲ့ ပမာဏက မနညျးလှပါဘူး။ သူ့ရဲ့ တဈလဝငျငှဆေိုရငျ ၂ ဘီလီယံ (၂,ဝဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ ဒျေါလာ) အထိ ရှိခဲ့တာပါ။ တဈရကျဝငျငှေ တှကျခကျြကွညျ့လိုကျတော့ ဒျေါလာ ၆၆ သနျးကြျော (၆၆,၆၆၆,၆၆၆ ဒျေါလာ) အထိရှိပါတယျ။ တဈနဝေ့ငျငှေ ဒျေါလာ ၆၆သနျးဆိုတာကွီးက မကျြခုံးလှုပျစရာကွီးပါ။ တဈစက်ကနျ့ဝငျငှကွေညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ ၇၇၁. ၆ ဒျေါလာ ရှိပွနျပါတယျ။ အမရေိကနျတဈဒျေါလာဈေးဟာ မွနျမာငှေ ၁,၃၄၈ကပျြအထိရှိတာမို့ မကျဇူကာဘတျရဲ့တဈစက်ကနျ့ဝငျငှဟော မွနျမာငှေ ၁ဝသိနျးကြျော (၁,ဝ၄ဝ,၁၁၆ ကပျြ) တောငျ ရှိတယျလို့ ဆိုခငျြပါတယျ။